Ukukhangela, ukuKhathalela ngokuLula iiTlanzi zaseTropiki | Ngeentlanzi
Los intlanzi yetropiki yasemanzini Ziyeyona nto ibalulekileyo kukwahluka kwemibala kunye nomoya olungileyo, ochwayitileyo nozolileyo ohanjiswa yi-aquarium, akunzima ukuyinyamekela kodwa bafuna ukhathalelo oluyimfuneko kwaye ikhethekileyo ekusebenzeni ngokufanelekileyo kwendawo yazo kunye ne-ecosystem.
Kuyacetyiswa, nangona kukho iindidi ezininzi, oko Iintlanzi zaseTropiki zivela kusapho olunye. Kukho iintlobo ezingahambelaniyo kwaye inokuba yingxaki yokwenyani kwabo bangomelelanga kangako ukuya kwinqanaba lokutya omnye komnye okanye ukulwa ne-nauseam yesikhangiso. Eyona nto ilungileyo yintlanzi enokuthi phakathi kwabo ibe nokuhlalisana okuhle kwaye ifuna iimpawu ezifanayo, kubandakanya ukutya.
I-aquarium kufuneka ibenkulu ngokwaneleyo, kuthathelwa ingqalelo inani leentlanzi eziya kuhlala kuyo, nayo yonke inkqubo yendalo ekufuneka ibandakanyiwe, Iintlanzi zidinga indawo yokuhlala ukuze zihambe ngokukhululekileyo kwaye ngaphandle kwengxaki zesithuba ezinokubanciphisa. Kunye nesifudumezi esilawula ubushushu bamanzi, kufuneka sibe phakathi 21ºC kunye no-29ºCKuyacetyiswa ukuba uyibeke kwindawo apho amanzi ajikeleza kakuhle kwaye uyibambe ngeekomityi zokutsala, ithemometha yokulawula ubushushu kunye nefilitha engqinelana neelitha ze-aquarium.
Es umhlobiso obalulekileyo, kuba iyinxalenye yendawo yokuhlala yentlanzi yetropiki, njengoko kunokuba zizityalo eziyimfuneko kubhalansi olugqibeleleyo. Amatye, iinkuni, igrabile, esebenza ukubamba isilivere kunye nomoya ezahlukileyo kunye nezinto zokuhombisa, ezithi kwangaxeshanye zifihle kwaye zidlale, ezinje ngezikhephe okanye iikholamu.
Ulondolozo lwazo olulungileyo, ngaphandle kokubondla, luyimfuneko khangela ukuba yonke le nkqubo isebenza ngokuchanekileyo kwaye uqaphele ukuba iintlanzi zetropiki zilungile ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Amanzi akwariyam akwariyam » Ukutsala amehlo, ukhathalelo olulula lwentlanzi